Mana barnootaa dubartoota Chaayinaa 'naamusa' barsiisu - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Pear Video
Vidiiyoon dhiheenya kan gadiifame tokkos 'mana barbootaa naamusaa' keessatti dubartoonni Chaayinaa jilbinfatannii akka harkaan lafa qulleessan dirqisiifamu.
Baroota dhiyoo keessa wiirtuleen leenjii kan dubartoota 'qajeeloo' taasisu guutummaa Chaayinaatti babal'ataa jira. Bakka leenjii kanatti dubartootatti kan himamu hojiifi dubartummaan walitti hin makamu jechuudhaan hojii barumsa hin barbaachifne akka hojjetan dirqisiisu. Garuu dhimmi kana keessa maaltu jira laata?
Oduun Chaayinaa Kaabaa magaalaa Fushuunitti akka seeraa aadaa keessa jiruufi duraan tureen dubartoonni "qajeelummaa dubartii" barsiifamaa jiru jedhu dhaga'amu guutummaa biyyattiin haariidhaan guutamte.
Ergaawwan ijoon dubartoota manneen barnoota kana hordofaniif dhiyaatan keessaa:
"Dubartoonni hojii idilee hojjetan dhuma hin tolan."
"Dubartoonni sadarkaa hawaasaa gajjallaarraa taa'uu qabu, ol ba'uuf yaaluu hin qaban."
"DUbartoonni yeroo hundaa ajaja abbaa isaanii, abbaa manaa isaaniifi ilma isaanii hordofuu qabu."
"Yeroo abbaan manaa kee si rukkutu tasa gara galtee hin rukkutiin, yeroo inni sitti dheekkamus dura dhaabbattee hin falmiin."
"Dubartiin tokko dhiirota sadii ol waliin yoo saalqunnamtii raawwatte dhukkubni qabatee du'uu dandeessi."
Bulchaan naannoo Fushuun deebii kennuuf yerroo itti hin fudhanne. "Barsiifni dhaaba kanaa faallaa dudhaa hawwaasaati," jedhe biiroon barnoota Fushuun ibsa isaa keessatti.
Qeequmsa Chaayinaa keessatti karaa pireesiifi miidiyaa hawaasummaa dabalaa dhufeen, anga'oonni magaalattii dhaabbanni waggaa ja'a lakkoofsise akk cufamu ajajan.
Intala waggaa toorbaa kan taateefi takkaa kan wiirtuu Fushuun kanatti leenjite Jiingiin, bu'aa tarkaanfii sanaa arguu kootti baayyee akka gammadde BBC tti himte.
Amma Jiibgi waggaa 13 geesseetti. 'Qeqera' akka taate itti himamee haadha ishee wiirtuun sun barnoonni aadaa of keessa qabu sun akka ishee qalbii/naamusa horattu naaf taasisa amantaa jedhu qabduun gara wiirtuu kanaatti ergamte.
Barsiisaa tokko dubartoonni yoo abbaa warraa isaan gaafatu hundatti 'tole, rakkinni hinjiru fi haa ta'u,'' qofa jechu akka qabaatan gorse .
Akuma haadhotii biro ijoollee isaanii akka leenjii sana hordofan erguuf dirqamanii haati Jiingis baadiyaaatti guddattee barumsa xiqqoo qabdi.
Jiiingi rakkoo dabarsite sana ni yaadatti, "Akka hojii leenjichaatti, arka koo qullaa akkan mana fincaanii qulqulleessun dirqamaa ture." "Akka malee jibbisiisaadha!"
Waanti akka Sanaa waanta dubartiin hojjechuu qabdudha, dubartiin dhiira gargaaruuf uumamte. Jiingi hanga har'aa maaliif yeroo mana fincaanii qulqulleessaa turtetti akka gowaantti hin kee hinineef, maaliifimmoo adeemsa rakkisaa akkasii keessatti hirmaachuun akka barbaachise hin beektu. ba'uun.
Malli barsiisuun barbaachisaan kan biraan barattoonni yakkawwan hojjetan maatii isaaniifi angafoota isaanii biraatti of himuu qabu.
Jiingi akka jettutti sirnni barnootaa barmaatilee durii irra deebiyanii jechhu/raawwachuurraa hanga hojii manaa hojjin agarsiisuufi yeroo waanta akka dhidhiibbaa qoor-qalbii fakkaatuun waliifi qooduu dabalata.
Bara jaarraa fi'udaalaatti ''naamusin dubartootaa' chaayinaa baayyee babalatee ture.
"Kaampiin guyyoottan toorban keessatti leenji'an kun namoota idileef bakka hin qabu. Amma sammuu namaa jallisutti obaafamuu yeroo Sanaa obsuu hin danda'u, achumaan guyyaa afraffaa dallaa sibiilaan ijaarame kireen baqadhee sokke."
Namoonni baratan hedduun magaalota gurguddoo kan akka Beejingiifi SHangaa'i barnoonni akkasii jiraachuun kan isaan rifachiisuufi waan badaa ta'uu danda'a.
DHugaa jiruun garuu, barmaatileen boodatti hafoo akkasii kun magalota xixiqqoo Chaayinaa, keessumaa naannoowwan baadiyyaatti keessatti akkuma itti fufanitti jiru.
Waggoota kumaatamaaf jaarraa Fiwudaala CHaayinaa keessa "qajeelummaan dubartii" akka seera ittiin bulmaataa dubartootaa ta'ee bal'inaan fudhatamaa ture.
Kun abbaa, abbaa manaafi ilma ofiif abboomamuu; durbumaa ofii kabajuufi eeggachuu, akkasumas dubartiin kennaa hin qabne akka qejeeltuu taate hubachuu dabalata.
Chaayinaa durii keessatti seeronni kun manaafi mana barumsaatti akka meeshaa ittiin dubartoota garboofataniifi acuucan gargaaraa ture.
Hnaga Dura ta'aa Maa'oon murtee, "dubartoonni walakkaa samii qabatu" ejjennoo agarsiisutti hin turre, erga Rippabilikni Uummata Chaayinaa bara 198 hundeeffamee dubartoonni CHaayinaa sadarkaa haawwaasaatti ol ba'uu eegalan.
Carraa yaadonni fiwudaalaa maqaa aadaa durii jedhuun deebiyee dhufuu, hedduuf yaaddoo dhugadha.
Bartoonni fakkii harkaan hojatame fulduratti gombiifamuun 'cubbuu' isaaniif dhifama akka gaafata taasifamu.
Ilaalchi/dudhaan uumamuu dhaabbilee kana duuba dhimmaa tokkicha miti.
Wiirtuu Aadaa Fuushuun fudhadhu. Biiroo dhimmaa hawwaasummaa Fuushuniin akka "Akka walitti qabama sabaa" ta'etti mirkanaa'ee, akka mana barumsaa gaggeessaniifi garuu beekamtiin hin kennamneef.
Sun garuu warra kan hundeessa manneen barnootaafi kaamppiiwwan leenjii magaalota gara graa guutummaa Chaayinaa keessa jiranitti banuu isaan hin dhowwine. Akka gaabaasa miidiyaatti osoo hin cufamiin dura barattoota 10,000 qaba ture.
Viidiyoo beeksisaa keessatti gaggeessaan ol-aanaa dhaabbatichaa Kaangi Jiinsheengi dhaabbatichi guutummaatti maallaqa bartootarra argamuun gaggeeffama. Hojii kana biraati hojjetu uffata aadaa Chaayinaa hojjechuun karaa toora interneetii gurguruu ykn qophiiwwan aadaarratti dhiyeessuu hojjetu.
Manneen barnoota kunneen baayyeen isaanii baadiyaa xixinnootti argamu.
Wiirtuu leenjii sun kan xiyyeeffate maatiiwwan ijoollee rakkisoo ta'an qaban ta'ee karaa aadaa duriitiin jijjiiruuf waadaa galuudhaan. Kampaanotattis of beeksisuun barsiifni isaa waajira isaanii naannoo hawwataa akka taasisu godha jedh
Barattoonni baayyeen dubartoota baadiyyaa barnoota xiqqoo qabniifi muraasni ammoo warren gaa'ela isaaniitti hin gammanneefi abbootii warraa isaaniittin akka hin taanetti qabamanidha.
Wiirtuuwwan akkasii kun maqaa aadaa Chaayinaa beeksisuu jedhuun sobanii qarshiifi hojjetu. Sababii seera qabeessummaan isaanii gaaffii kaaseef ykn qabiyyee barnootaa hin mirkanaa'iin waan fayyadamaniif hedduun isaanii cufamaniiru.
Haata'u malee, baayyoonni isaanii ammallee hojjetaa jiru. Wirrtuun inni guddichi Fuushuun jiru cufamulleee dameewwan isaa bakka biroo jiran hanga ammaatti hojjechaa jiru.u.
26 Guraandhala 2021
Ajjeechaa Hacaaluun kan himataman keessaa tokko akka gadhiifamtu murtaa'e
Ameerikaan iccitii ajjeechaa Jamaal Kaashogjii irratti gabaasa baasuuf